Xulka K/cagta Somalia oo galabta la ciyaaraya xulka Niger ciyaar ka tirsan is reeb reebka Koobka Adduunka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xulka K/cagta Somalia oo galabta la ciyaaraya xulka Niger ciyaar ka tirsan is reeb reebka Koobka Adduunka
9th October 2015 MAREEG Af Soomaali 0
Xulka K/cagta ee Qaranka Soomaaliya ayaa galabta la ciyaaraya xulka K/cagta ee Niger ciyaar ka tirsan is reeb reebka Koobka Adduunka ee sanadka 2018 lagu qaban doono dalka Ruushka.
Ciyaartan ayaa ka dhici doonta magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaasoo Xulka Qaranka Soomaaliya ay gurigooda oo kale ay ku ciyaarayaan, maadaama magaalada Muqdisho lagu ciyaari karin sababo amni awgeed.
Labada xul ee Soomaaliya iyo Niger ayaa dhowr jeer oo hore isku arkay Tartamo kala duwan, waxaana marna dhinacooda la dhigin Niger, waxaana markii ay u dambeysay ee ay Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho ku wada ciyaaraan ay aheyd sanadkii 1980-kii, balse ku dhamaatay 1-1, Niger ayaana xilligaas rigoorayaal ku badisay.
Xulka Qaranka Soomaaliya ayaa ku ciyaari jiray dalka Jabuuti, marka martida loo yahay oo kale ee ka dhigan sida in gurigooda lagu ciyaarayo oo kale, hase ahaatee Jabuuti ayaa waxay iyana galabta qaabili doontaa xulka K/cagta ee Swaziland.
Si kastaba ha ahaatee tartanka Ciyaaraha Is reeb reebka Afrika ee Koobka Adduunka ayaa waxaa labadan xul tii soo baxda ay u gudbi doonaa wareega Group-yada is reeb reebka, maadaama Afrika laga rabo kaliya shan dal.
Iska-horimaad ‘Khasaaro geestay’ oo ka dhacay Deegaanka Ufurow, G/Baay